ဖက်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ရိုးရာထမင်းတွေကို ဆန်းဆန်းပြားပြားသုံးဆောင်နိုင်မယ့် မြို့မေတ္တာ……….. – FoodiesNavi
By yin sandi On February 2, 2018 0
အခုတလောအစားတစ်လိုင်းတို့ကြားမှာ ? ? ? အထူးရေပန်းစားနေပြီး လူပြောအရမ်းများနေတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ? ? ? အမှတ်(၁၀၂၇) ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မြို့မေတ္တာဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ? ဒီဆိုင်လေးမှာဆိုရင်တော့ ? ? ? ရှေးမြန်မာတွေလက်ထက်တုန်းကလို ? ? ? ? ? ? အစားအစာတွေကို ဖက်ရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ♨️ ♨️ ♨️ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်သလို ရိုးရာထမင်းလေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်မယ့် ? ? ? ? ? ဟင်းလျာမျိုးစုံကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ?
မြို့မေတ္တာမှာဆိုရင်တော့ ? ? ? ? ? ? ? ? ဝက်ခေါင်းသုပ် ၊ ပုဇွန်မီးဖုတ်သုပ် ၊ ဝက်အူစုံသုပ် ၊ ပုဇွန်ကင်းမွန်သုပ် ၊ ကြက်ကြော်ရခိုင်သုပ် ၊ ခါကြက်ဥသုပ် ၊ ရှမ်းငှက်ပျောဖူးသုပ် ၊ ပဲဇောင်းခါးသီးသုပ် ၊ နှစ်တရာသီး ၊ အမဲဒိန်ချဉ်နှပ် ၊ အမဲမွကြော် ၊ အမဲကြော် ၊ ဆိတ်အာလူး ၊ ဆိတ်သားထောင်း ၊ ဆိတ်ငရုတ်ထောင်း ၊ ဆိတ်/ကြက်လက်ဖက်ထောင်း ၊ ရှမ်းဝက်/ကြက်သားထောင်း ၊ အသားစုံသောက်ဆမ်း (ကြက်၊ဝက်၊ငါး) ၊ ကျိုင်းတုံငါးခေါင်းဟင်းချို ၊ ကရင်တာလပေါဟင်းချို ၊ ဝက်နံရံမုန့်ညင်းစော ၊ အဏ္ဏဝါရခိုင်ချက်(ချဉ်၊စပ်) ၊ ပလောင်တောင်ယာဟင်းချို ၊ ဝက်လက်ပေါင်းမျှစ်ချဉ် ၊ ဝက်နံရိုးကြံမဆိုင် ၊ အင်းပုဇွန်ချက် ၊ ငါးရံ့မွန်ချက် ၊ ကြက်ကာလသားချက် ၊ ကချင်ငါးပေါင်း ၊ ကြက်ကချင် ၊ ကယားဝက်အူချောင်းကြော် ၊ မိုင်းလားကြက်သားချက် ၊ငါးအုံး ၊ ဝက်သားအုံး ၊ ပဲပုပ်ပန်ထွေဖျော် ၊ ကျိုင်းတုံငါးခေါင်းဟင်းချို ၊ ငါးသားတောင်ပေါ်သား ၊ ငပိချက် ၊ ငပိထောင်း ၊ တို့စရာတွေနဲ့ ရွှေရင်အေး ၊ ရေခဲသုပ် ၊ ဒိန်ချဉ်စတာတွေကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ?
ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ဖက်နံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ♨️ ♨️ ♨️ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သုံးဆောင်နိုင်တာဆိုတော့ တမူထူးခြားနေမှာတော့ ? ? ? အသေအချာပါပဲ။ အကောင်းဆုံးရိုးရာဟင်းတွေကိုလည်း ? ? ? ? ? ? တစ်နေရာတည်းမှာတစ်စုတစ်စည်းတည်း သုံးဆောင်နိုင်သလို ရိုးရာဖက်ထမင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ? ? ? ? ? ဟင်းလျာကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလည်း ရရှိနိုင်တာကြောင့် လျှာပေါ်မှာ တွဲဖက်ညီညီနဲ့အရသာကောင်းလေးတွေ ပလုံစီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ? အချိုတည်းစရာ ရွှေရင်အေး ၊ မုန့်လက်ဆောင်းချိုချိုမြမြလေးနဲ့ ဒိန်ချဉ်လေးကိုလည်း သုံးဆောင်နိုင်ဦးမှာဆိုတော့ လုံးဝရှယ်ပဲနော်။ ? ? ? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰ ⏰ ⏰ မနက်(၇)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/myotmyittar
In Restaurant Guides Tagged Kachin foods, Kayah Foods, Kayin Foods Leaveacomment